प्रहरी प्रमुख बन्न ९ करोडको प्रस्ताव आयो : पूर्व डिआइजी थापा
धापासी काठमाडौको महाराजगञ्ज बसुन्धरानजिकै रहेको एउटा सामान्य घर । घरभित्रबाट आउने हिन्दू धर्मका ती मिठा अनि देवीदेवता लोभ्याउने शैलीका श्लोकहरुको लय । यो सुनिसकेपछि बाटोमा हिडिरहेको मेरो मनमा कौतुहलता जाग्यो । साँच्चि नै हेर्दा शिक्षित वर्गको जस्तो देखिने यो घर तर धर्मप्रतिको लगाव ? यो कुरा नबुझी अगाडि बढ्न मनैले मानेन । दायाँबायाँ नहेरी गेटमै पुगेर बेल बजाएँ ।
आश्चर्यचकित भएँ तत्कालीन समयको रोयल नेपाल एयरलाइन्समा इन्फ्लाइट सुपरभाइजर पदमा रहेका किशोरप्रसाद शर्मा । उनै शर्माकी श्रीमती अनि सत्य सेवा सुरक्षणम्को मूलमन्त्रलाई आत्मसात गर्दै प्रहरी सेवामा ३० बर्ष बिताएकी पूर्व डिआइजी विमला थापा । हो, उनलाई आस्थाले शिर झुकाउँदै अभिवादन गरें अनि आप्mनो परिचय दिएँ ।
नेपाल प्रहरीको यति लामो इतिहासमा प्रहरीको उच्च तहमा पुग्ने महिलामध्येकी एक हुन् उनी । उनको बारेमा धेरथोर नजान्ने त कुरै भएन । अझ समग्रमा जान्ने उत्सुकता जाग्यो । त्यही मनशायले राजनीतिक दलको दवावले गिराएको संगठनको शाखसहित अध्यात्मका विषयवस्तु अनि धर्म के रहेछ ? भनेर उनको अघिल्तिर प्रश्न तेस्र्याएँ । जवाफ जस्तोसुकै होस् तर जान्न उत्सुक नै थिएँ म ।
‘असल, परोपकारी, सकारात्मक कामसँगै जीवन मृत्युसँग उत्तिकै सामिप्यतामा रही प्राणी र ब्रम्हाण्डको सम्बन्धसहित स्वभाव, कर्तव्य, अधिकार, कानुन, व्यबहार, गुण र जिउने शिक्षालाई नै धर्म भनिन्छ’, हातमा रहेको पूजाको थालीलाई नजिकै रहेको टेबलमा राख्दै जवाफ दिइन् उनले।
२०४० सालमा १ हजार ६ सय प्रत्याशीबाट प्रथम स्थानमा छनौट भएर प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् उनी । एउटा सक्षम प्रहरी अफिसर । अपराधको दुनियाँमा कठोर बनेर अपराधीलाई जेलको चिसो छिँडीमा बसालिन् उनले । आप्mनै प्रहरी संगठनभित्र आफू मातहतका कैयौ खराब आचरणका प्रहरी कर्मचारीलाई कारवाही गर्न कत्ति नडराउने प्रहरी संगठनकी नेतृत्व हुन् विमला। महिला तथा बालबालिका निर्र्देशनालयको प्र्रमुख रहँदा केही जिल्लामा महिला सेलसहित नेपाल प्रहरीमा जेण्डर पोलिसी निर्माण गरिन् उनैले । अनि नेपाल प्रहरीको इतिहासमा पहिलो इन्टरनेशनल अवार्ड पाउने महिला अधिकृत पनि विमला थापा नै बनिन् । उनी २०७० सालमा सेवा निवृत्त भएपछि हाल गुमनाम नै छिन् । किन ?
उमेरले उनी छ दशक पुगिसकेकी छन् । तैपनि, उनको प्रत्येक दिनको योगा अनि ब्रम्हकुमारी राजयोगको सामिप्यता र धर्मप्रतिको लगावले नै हो कि उस्तै जोश र जाँगरका साथ अगाडि बढिरहेकी छन् । ‘देशको राजनीति मेरो बाल्यकालमा भोगेको भन्दा दिनप्रतिदिन ओरालो उन्मुख देख्छु । कोही पनि नेता देशप्रति जवाफदेही देख्दैन । लुटतन्त्र हावी छ । नेताहरु आफू र आफना आफन्तीको उन्नतिमा मात्र केन्द्रित देख्छु । यस्तो गञ्जागोल र विदेशीहरुको क्रिडास्थल बनाइएको छ । देशमा म जस्ता कैयौलाई अहिलेको पद्धतिले गुमनाम बनाउनु स्वभाविक हो । बरु यसै बर्षदेखि प्रारम्भ भएको मातृभूमिका लागि नेपाली नामक अभियान सञ्चालन गरेका छौं हामीले । जुन अभियान देशको लागि समर्पित रहनेछ । जसमा म केन्द्रीय सचिवालय सदस्यमा पनि छु’, उनले बेलीबिस्तार लगाइन् ।
विमला थापा जब डीएसपीसम्म बढुवा भइन् तबसम्म उनी वरिष्ठताका आधारमा भइन् । त्यसपछिका बढुवामा भने त्यस्तो सुखद अनुभूति रहेन । संगठनप्रति वफादार र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा समेत अब्बल हुँदा पनि विभेद नै विभेदमा परेको तीतो अनुभूति छ उनीसँग । आफूभन्दा धेरै नै जुनियरहरु आफूभन्दा माथिल्लो पदमा पुग्दा बल्ल उनको बढुवा हुन्थ्यो । ‘अझ प्रत्येक बढुवामा आर्थिक चलखेल हुन्थ्यो’, उनले स्मरण गरिन्।
यतिबेला उनका दुई सन्तान अष्ट्रेलियामा छन् । उनलाई अष्ट्रेलिया जान पनि ठूलै दवाव छ सन्तानहरुको । उनी भन्छिन्, ‘मलाई उतै जान कर नगरेका होइनन् । मचाहिँ केवल उनीहरुलाई भेट्न जाने गरेकी छु । देशप्रति जिम्मेवार हुन्छु भनेर मातृभूमिको टीका लगाएकी म । बरु गुमनाम रुचाउँछु तर देश छोडेर प्रदेश जाने कुरै हुँदैन’ उनी थप्छिन् ।
नेपाल प्रहरीमा पहिलो महिला गुल्मपति उनी । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो महिला प्रहरी प्रमुख पनि बनिन् विमला । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सुरक्षा प्रमुखमा रहँदा प्रख्यात त्रिशक्तिपट्ट चौथो पदक, सवारी अनुमतिपत्र वितरण इकाईमा रहँदा गोरखा दक्षिण बाहु चौथोसहित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी करिब दुई दर्जन पदक तथा अवार्ड प्राप्त गरिसकेकी छन् उनले । प्रहरी सेवामा रहँदा मेची, गण्डकी, धवलागिरी अञ्चलसहित सुदुरपश्चिम प्रहरी प्रमुखको रुपमा उनले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्हालिसकेकी छन् । सेवामै रहँदा सिएरालिएन तथा कम्बोडियामा समेत पुगेकी उनी संगठन भित्रमात्र होइन संगठन बाहिर पनि आफनो जिम्मेवारी र कर्तव्यमा अडिग प्रहरी अफिसरका रुपमा परिचित नै थिइन् र अझै छिन् ।
कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री तारानाथ रानाभाटले आफू सवारी अनुमतिपत्र शाखा प्रमुख हुँदा नियम विपरीत सवारी अनुमतिपत्र नदिएको झोंकमा आफूलाई अन्यत्र सरुवा गरेको क्षण उनको मस्तिष्कमा ताजै छ । उनी सम्झिन्छिन, ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ भन्ने कार्यक्रमका सञ्चालक ऋृषि धमलाले बागमती अञ्ञ्चलमा सवारी अनुमति परीक्षा चरणमा फेल भएपछि नियमविपरीत भए पनि आफूलाई अनुमतिपत्र दिनुपर्ने र नदिए दुई घण्टाभित्रमा नै सरुवा गरिदिने धम्की दिएको कुरा पनि सम्झिइन् उनले । ‘ती दिनहरुमा नडराई कर्तव्यमा अडिग भएको र एक÷दुई घटनाक्रमले पनि प्रहरी संगठनमा कस्ता कस्ता दवाव आउँदा रहेछन् भनेर बताउँछन्’ उनी थप्छिन् ।
पूर्व डिआइजी थापाले एउटा घटना सम्झिन् । प्रहरी सेवाको कार्यकालमा तेस्रोपटक सवारी अनुमति शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको बेला दरबारबाट तत्कालीन अधिराजकुमारी श्रृति राज्यलक्ष्मी शाहलाई सवारी अनुमति पत्र चाहियो भनी दरबारको आदेश लिएर कोही उनको कार्यकक्षमा आए । दरबारको आदेश चल्ने त्यस समयमा उनी भने टसको मस भएनन् । आदेश लिएर आउने व्यक्तिलाई ‘कानुन सबैको लागि बराबर’ भएको भन्दै ‘कानुनविपरीत म बर्दी खोल्छु तर अनुमति पत्र दिन सक्दिन’ भनि पठाएको उनले सम्झिन् । पछि श्रृति राज्यलक्ष्मी शाहले तीन दिनको कक्षासहित लिखित, मौखिक र प्रयोगात्मक परीक्षा दिएकी थिइन् ।
श्रुतिले परीक्षा उत्तीर्ण गरी अनुमतिपत्र प्राप्त गरिन् । थापा भन्छिन्, ‘यो सम्झँदा यी अहिलेका शासकभन्दा दरबार बरु प्रजातान्त्रिक थियो भन्ने महसुस हुन्छ ।’ उनले उल्टै प्रश्न गरिन्, ‘यसैबाट थाहा भएन र शासकहरुको चरित्र ?’
डीआइजीबाट बढुवा हुने क्रममा झन् सबैभन्दा नराम्रो अनुभूति छ उनीसँग । ‘देश परिवर्तन गर्छु भन्ने नेताजीबाट नै ९ करोड दिने हो भने प्रहरी प्रमुख बनाइदिन्छु’ भन्ने प्रस्ताव आयो’, विमलाले थपिन्, ‘यस्तो प्रस्ताव आएपछि मलाई बल्ल अब संगठन कमजोर बन्यो भन्ने लाग्यो ।’ त्यो बेला आफूमा विरक्ति छाएको बताउँदै विमलाले निर्धक्क भएरै भनिन्, ‘त्यस्तो प्रचलन अहिले पनि छ। हामी ब्यवसायिक प्रहरी अनि मजबुत प्रहरी संगठनको नारा दिन्छौं । यी सब फगत भनाई मात्र हुन् ।’
(पूर्व डीआइजी विमला थापासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)